on November 10, 2016 Related - Junior WIn Short Stories
Photo - YIT
(မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၆
ဒေါက်တာစူးသာ အသက်ရှိသေးရင် ဂရန့်က ကြီးကျယ်ခန်းနားလှတဲ့ မြို့ကြီးအား ၀ါးမြိုခြင်း ဆုိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကလေးတွေအတွက် ကာတွန်းတစ်ပုဒ်ရေးဆွဲလိမ့်မယ်လုို့ ဒေါက်တာသရော့ ဆုိုတဲ့စာရေးဆရာက အာဖီးမက်ဆေး ပန်းချီဆရာနဲ့ တွဲဖက်ကာ ရေးထားတဲ့ သရုပ်ဖော်ကာတွန်းတစ်ပုဒ် အွန်လုိုင်းစာမျက်နှာ မှာ ထွက်ပေါ်လာတယ်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အောက်တုိုဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာ ကလေးမလေးတစ်ယောက်က အိပ်မက်ထဲမှာ အဘုိုးကြီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ အဘုိုးကြီးက စားစရာဝယ်ဖုို့ ကူညီပါဦး လုို့ပြောတယ်။ “ပုံပြင်တွေရမယ် ဒေါ်လာတထောင် “ လုို့ ဘုတ်မှာရေးထားတာတွေ့တော့ ကလေးမလေးက တော်တော်လန့်သွားတယ်။ သူဘယ်လုိုမှ မတတ်နုိုင်ဘူး။
ဒါဆုို ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်တော့ ပြောပြပါလား။ ကလေးမလေးက ပိုက်ဆံတော့မပေးနုိုင်ဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် သူထုိုးထားတဲ့ သုိုးမွှေး ခြေအိတ်တစ်စုံတော့ ပေးနုိုင်ပါတယ်ဆုိုပြီး အဘိုးကြီးဆီက ပုံပြင်တစ်ပုဒ်နားထောင်ခဲ့ ရတယ်။ ပုံပြင်ရဲ့နံမယ်က “ကြီးကျုယ်ခန်းနားလှတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့ကျဆုံးခန်း” ။
ဟုိုးအဝေးကုို ကြည့်လုိုက်စမ်းပါ….. သိပ်ကုို ကြီးကျယ်ခန်းနားလှတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့ကုို တွေ့ရမယ်…. အဲသည်မှာ … အင်မတန်ကုို ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေ၊ အင်မတန်ကုို ကြီးကျယ် ၀င့်ကြွားတတ်တဲ့သူတွေ … မင်းနဲ့ ငါ့လုိုပေါ့….. အဲသည်လုိုလူတွေ နေထုိုင်ကြသတဲ့။ ငါတုို့တွေက အလုပ်ကိုလည်း ကြိုးစားလုပ်ကြ၊ ပျော်လည်း ပျော်ကြတယ်။ တနေ့တော့ လူတွေက စဉ်းစားမိလာကြသတဲ့။ အဲသည်မြို့ကြီးဆီကုိုသာ ပြောင်းရွှေ့နေကြရင် သူတုို့လည်း အဲသည်က လူတွေလုို ဖြစ်လာမှာပဲလုို့ တွေးလာမိကြတယ်။
သည်လုိုနဲ့ ချမ်းသာခြင်းကုို စားသုံးရင်း တစ်နှစ်ကုန်တုိုင်း တစ်နှစ်ကုန်တုိုင်းမှာ ဒိထက်မက ပိုပြီး လုိုချင်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် တချိူ့သောသူတွေကတော့ အရင်တုန်းကလောက် သိပ်ချမ်းသာမလာ ကြဘူး။ ဒီတော့ ငါတုို့တွေဟာ အမှားတွေ လုပ်မိလာကြတယ်။ သိပ် သိပ်ကုို ကြီးမာတဲ့ အမှားပေါ့… ငါတုို့တုိုင်းပြည်အတွက် အမှားကြီးကြီးကုို လုပ်မိကြပြီ။
တုိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ ပြင်ဆင်ထားတာမရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကုို ခေါင်းဆောင်အဖြစ် မဲပေးကြတယ်။ ငါတုို့တုိုင်းပြည် ပုိုပြီး ဆုိုးသွားအောင်၊ ငါတုို့တုိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစုိုက်ဖူး ဆုိုတဲ့ သူကိုမှ ငါတုို့မဲပေးခဲ့ကြတယ်လေ။
သူ့နံမယ်ကတော့ မစ္စတာ ဟာရုိုးဂျေဂရန့်။ လူတွေကတော့သူ့ကုို မစ္စတာ ဂရန့်လုို့ခေါ်နေကြတယ်။ မစ္စတာဂရန့်ပုံက ဘာဖြစ်လုို့ စိတ်တုိုင်းမကျဖြစ်နေပုံပေါက်လဲဆုိုတာ လူတွေက သိပ်မသိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တချိူ့ကပြောတာတော့ သူ့လက်တွေရဲ့အရွယ်အစားက သာမန်ထက် တ၀က်လောက် သေးလွန်းနေလို့လို့ဆုိုတယ်။ သူငယ်ငယ်တုန်းကတော့ သူ့လက်သေးသေးလေးတွေနဲ့ ဘောလုံးအကြီးကြီးကုို မကိုင်နိုင်လုို့ ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ရယ်စရာလုပ်ပစ် တာခံရဘူးသတဲ့။ သူ့လက်ကလေးတွေက သေးသေးလေးတွေ ဆုိုတော့ ဘောလုံးအကြီးကြီးကုို မကုိုင်နိင်ဘူး။ ဒီလုိုနဲ့ သူရဲ့ အသဲနှလုံးလေးမှာ ဒဏ်ရာရသွားလေတော့ သူ့လက်ကလေးက လေးပုံတပုံစာ လာက်တောင် ပုိုသေးသွားတယ်။ (သတိထားကြနော် … သူများကုို ဒဏ်ရာမပေးကြနဲ့။ တချိန်ကျ သူကြီးလာရင် တခြားလူတွေကုို ရယ်စရာလုပ်ပစ်လိမ့်မယ်။)
တဖြေးဖြေးနဲ့ သူအသက်တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ်ကြီးလာတယ်။ သူ့အဖေဆီက (သူ့အစွမ်းအစနဲ့မဟုတ်ပဲ) ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ရလာပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတယ်။ သူက ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် နေထုိုင်ရတာကို နှစ်သက်တယ်။ သူနံမယ် “ဂရန့်” ဆုိုတဲ့စကားလုံးကုိုတောင် အကြီးကြီးရေးထုိုးထားတယ်။ ဂရန့်တက္ကသုိုလ်၊ ဂရန့်ပလာဇာ၊ ဂရန့်ကာစီနုို၊ ဂရန့်တာဝါ၊ ဂရန့်ပန်းခြံ၊နဲ့ ဂရန့်တိရိစာန်ဥယာဉ်တွေကို ဆောက်တယ်။ ဂရန့်ကြက်ကျော်၊ ဂရန့်ရေ (သူ့ရေက တော်တော်အေးတယ်ဆုိုပဲ)။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကမှ အရသာမရှိတဲ့ မုန့်တွေကုို မကြိုက်ကြပါဘူး။ နှစ်တွေကြာလာတော့ သူ့ဘ၀ကြီးကုို ငြီးငွေ့လာတယ်။ “သမုိုင်းတွင်သွားအောင် နောက်မိန်းမအသစ် ယူဦးမှ” ။
တစ်နေ့တော့ သူ့ရဲ့ ၉၉ ထပ်ကနေ အောက်ကုို ငုံ့ကြည့်ပြီး မစ္စတာဂရန့်က အခုလုိုတွေးမိတယ်။ အရာရာဟာ ဟုိုး အရင်ကလောက်တောင် မကောင်းတော့ပါလား။ ပြစ်မူတွေ ကျူးလွန်နေကြတာတွေ တွေ့တယ်။ လူတွေ အလုပ်ပြုတ်သွားကြတာ၊ ကျမ်းမာရေး ချိူ့ယွင်းနေတာတွေ တွေ့တယ်။ ငါဒါတွေ ပြုပြင်နုိုင်မယ်၊ ဘယ်လုိုချမ်းသာအောင် လုပ်ရမယ်ဆုိုတာ ငါသိတယ် လို့ပြောလုိုက်တယ်။ သြော် …. လူဆင်းရဲတွေကလဲ ငရဲကျနေသလုို နေနေကြရပါလား။ ဒါတွေကုို ပုိုကောင်းအောင် လုပ်ရမယ်။ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ မြို့ကြီးကို နေကောင်းသွားအောင် လုပ်ရမယ်။ ဟုတ်တယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမုိုးရေး လိုအပ်တယ်။ အရာရာဟာ ဖြောင့်ဖြောင့်သွားရမယ်။ ဟောသည် မြို့ကြီး ကြီးကျယ်ခန်းနားအောင်လုပ်နုိုင်တဲ့သူ ငါပဲရှိတယ်။
ဟောဒီ တပါးတုိုင်းပြည်က ဆင်းရဲသားတွေက မင်းတုို့အလုပ်တွေကုို လုယူထားကြတယ်။ မင်းတုို့အလုပ်တွေ ပြန်ရအောင် သူတုို့ကုို ဖယ်ထုတ်ကြမယ်။ နံရံအကြီးကြီးဆောက်လုပ်ပြီး သူတုို့အားလုံး မောင်းထုတ်ပစ်မယ်။ ပြစ်မူတွေတုိုးပွားနေတာ ကင်းစင်ရမယ် ၊ ငါတုို့အလုပ်တွေ ပြန်ရစေရမယ်.. လုို့သူက ကြွေးကျော်လုိုက်သတဲ့။ အခွန်အခနည်းဖုို့ကုို ငါတုို့လိုလားတယ် လုို့ဂရန့်ကပြောလုိုက်တယ်။ သည်တော့ ကျမ်းမာရေး အစောင့်အရှောက်ခက ငါတုို့စီးပွားရေးကို ခြွတ်ခြုံကျအောင်လုပ်ထားတယ်။ သူလျောက်ပြောနေတဲ့ စကားလုံးတွေကို နုိုး လုို့ပြောမယ့်သူတွေ လုံလုံလောက်လောက်မရှိလေတော့ သူက ရွေးကောက်ပွဲမှာ နုိုင်သွားတာပေါ့။
မစ္စတာဂရန့်က သူကတိပေးထားတဲ့အတုိုင်း နံရံအမြင့်ကြီးဆောက်တယ်။ ပြည်ပက လာနေသူတွေကုို မောင်းထုတ်ပစ်လုိုက်တယ်။ မိသားစုတွေ၊ ကလေးတွေ၊ အားလုံး အားလုံး။ အဲသည်နောက်တော့ လယ်သမားတွေက သူ့ကုို ရပ်ပါတော့ လုို့ပြောကြတယ်။ ကျူပ်တုို့ အလုပ်သမားတွေ မရှိတော့ဘူး။ ဘယ်သူက သီးနှံတွေ ရိတ်သိမ်းပေးမှာလဲ။ ဂရန့်က ပင်လယ်ကြီးထဲက သဘောင်္လုပ်ငန်းတွေကုို အခွန်ကောက်တယ်။ သည်တော့ ရေကြောင်းကနေ၀င်တဲ့ အ၀တ်အစားနဲ့ အရာရာဟာ ဈေးတွေ မတန်တဆတက်သွားတယ်။ ဟောသည် မြိြု့ကီးမှာ စားစရာနဲ့အ၀တ်အစား ဈေးတွေကြီးကုန်ပြီ။ လူတွေတော်တော်များများ ရှော့ပင်းတောင် မထွက်ဖြစ်ကြတော့ဘူး။ ဈေးဆုိုင်ပုိုင်ရှင်တွေ အိမ်ပြန်ကြ၊ အလုပ်သမားတွေလဲ အိမ်ပြန်ကြ၊ ဈေးဝယ်သူလဲမရှိ၊ ဘာအလုပ်မှလည်း မရှိ။ ဂရန့်က ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မူကုို ဖြတ်သိမ်းပစ်လုိုက်ပြန်တယ်။ လူတွေနေမကောင်းဖြစ်တော့ ဆရာဝန်စရိတ်နဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ကုန်ကြတယ်။ ကျမ်းမာရေး စောင့်ရှောက်မူစရိတ်က ငါတုို့ကုို အကူအညီဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါတုို့ နေမကောင်း ဖြစ်တော့ အလုပ်မလုပ်နုိုင်တော့ဘူး။ ဆရာဝန်ပေးဖုို့ ပုိုက်ဆံ ဘယ်ကရမလဲ။ ဒီကောင်… ဂရန့် (အခုတော့ သူ့ကုို ဆဲဆုိုနေကြပီ)။
ဒါပေမယ့် ဂရန့်နဲ့ သူ့အပေါင်းအပါတွေကတော့ ကျမ်းမာရေးခလောက်တော့ ဂရုမစုိုက်ဘူး။ အခွန်ငွေတွေလျော့ချပြီး ချမ်းသာသထက် ချမ်းသာနေတယ်။ အဲဒါငါတုို့ပိုက်ဆံတွေ၊ ငါတုို့ပုိုင်တယ် လုို့အော်လဲပဲ ဂရန့်က မမြင်ဖူးလား မင်းတုို့က အလုပ်ကုို ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ရင် ငါ့လုိုချမ်းသာလာမှာပေါ့။
အဲဒါကတော့ ငါတုို့ရဲ့ကြီးကျယ်ခန်းနားလှတဲ့ မြိ့ကြီး ကျဆုံးခန်းပါပဲ။ ငါတုို့မှာအလုပ်တွေလဲ မရှိတော့ဘူး။ ဘာမှလည်းဝယ်စရာမရှိ၊ ၀ယ်စရာပုိုက်ဆံလဲမရှိ။ အဘုိုးကြီးရဲ့ လေသံနည်းနည်း ပြောင်းသွားတယ်။ သူက မင်းတုို့ ဂရန့်ကုိုသာမဲပေးရင် အဲသည်လုိုဖြစ်မှာပေါ့။ အကယ်၍များ….. အဖုိုးကြီးဟာ အပြာရောင် မီးခုိုးငွေ့တွေနဲ့ အတူ ပျောက်သွားတယ်။ ကလေးမလေးက အိပ်ရာက ရုတ်တရက်နုိုးသွားတယ်။
“အဲသည်လိုဖြစ်မှာပေါ့။ အကယ်၍များ…..“ စဉ်းစားနေမိတယ်။ အကယ်၍များ… ဘာဖြစ်မှာလဲ။
ပုံပြင်ဟာ နောက်ဆုံးမှာ အဖြေတစ်ခုထုတ်ပေးလုိုက်တယ်။ အကယ်၍များ သူမကုိုသာ မဲပေးခဲ့ရင်တော့ သည်မြို့ကြီးအတွက် မျော်လင့်ချက် တစုံတရာ ရှိလာနုိုင်တယ်။ ပုံပြင်ဟာ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တစ်ခု ဖြစ်လာတယ်။ သူမက မဲနုိုင်သွားပြီး ဂရန့်က ဂရန့်လေယာဉ်ပျံကြီးစီးလုို့ အိမ်ပြန်သွားရတယ်။ တုိုင်းသူပြည်သားတွေက မြို့ကြီးကုို ကယ်နုိုင်လုိုက်ပြီလုို့ အဆုံးသတ်ထားတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းက အမေရိကန် ရဲ့၂၀၁၆ခုနှစ် ကလင်တန်နဲ့ ထရန့်တုို့ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခင်မှာ ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ တော်တော်များများက ကလင်တန်ကို နုိုင်မယ်လုို့ ထင်ထားကြတယ်။ မျောက်ဗေဒင်ကလည်း ကလင်တန်နုိုင်မယ်လုို့ဟောသတဲ့။ နောက်တနေ့မှာမှ အဖြေသေချာမှာမုို့ စိတ်လျော့ပြီးအိပ်ကြ၊ မနက်ကြတော့ အဖြေသိရမှာပေါ့လုို့ ဆုိုသတဲ့။ ဒါပေမယ့် ခုနက ဖတ်လုိုက်ရတဲ့ ပုံပြင်ကလေးထဲက အိပ်မက်ထဲမှာ ဂရန့်ကတော့ နုိုင်သွားတယ်မဟုတ်လား။ ဒါဆုိုရင် စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပေါ့လေ။ မနက်ကျတော့ အဲဒါ အိပ်မက်လား တကယ်လားဆုိုတာ သိရမှာပေါ့။ ဂွတ်နုိုက်။